Imamka Masjidka Portland, oregon oo la xiray
Sida eey sheegtay wakaaladda wararka ee AP ku dhawaad 200 oo qof ayaa isugu soo baxay maxkamad saaridda wadaadka la yiraahdo Sh. Max'ed C/raxman Kariye oo ah imaamka masjidka Al-Sabr ee magaalada Portland ee gobolka Oregon, si eey taageero ugu muujiyaan. sheekha ayaa lagu heystaa danbiyo lagu soo oogay oo eey ka mid yihiin " isdaba marsiin dukumiinti & foorjari" !, waa sida warku u dhigaye.
. FBI Searches Islamic Leader's Home
. Muslim Supporters Rally Around Sheik
Muslims pay tribute to 9/11 victims, speak of consequences on Islam's followers in America more..
Five illegal immigrants arrested in Baltimore; material seized more...
The Warlord Who Laid Down His Gun to Preach Peace
Maalintii shalay aheyd ayaa wadaadka gurigiisana baaritaan loogu dhaqaaqay sida eey Police-ku sheegeen. inkastoo axaddii la qabtay isaga.
25 qof oo kaliyah ayaa loo oggolaaday ineey qolka maxkamaddu ka socoto galaan, inta kalena waxaa lagu horay barsadda & jaranjarooyinka maxkamadda.
Mid ka mid ah dadka sheekha inbadan yaqaanay oo la yiraahdo Musse olol ayaa saxaafadda ku yiri " .. wey dhici kartaa.. qofkasta ayeey ku dhici kartaa.... laakiin hogaamiyaheena ayuu ahaa" Mr olol wuxuu sheegay inuu sheekha garanayo muddo ku dhow 18 sano !
Sh.Kariye waxaa lagu soo oogay isticmaalid waraaqo been abuur ah & magac badalid sharci darro ah, isagoo baa la yiri " dalbaday kaarka badbaadada bulshada (social security) saddex goor oo kala duwan intii u dhexeysay 1983 ilaa & 1995-tii" sidoo kale wadaadka waxaa lagu eedeeyey inuu taariiq-dhalasho been abuur ah qortay mar uu dib isu dhiibay 1998-dii ! laakiin sheekhu arrintan wuu beeniyey, maxkamad ayaana u ballansan bisha novermber 5-teeda.
FBI-da ayaa diidan ineey sheegaan wixii eey ka soo heleen guriga sheekha.
sheekh Kariye waxaa lagu xiray gegida caalamiga ah ee Portland isaga, walaalkiis & affar caruur ah oo uu dhalay oo wata tigid aan soo laabasho laheyn (one-way ticket) kuna sii jeeda waddanka Imaaraadka carabta.
nabad suggiddii baartay boorsooyinkiisa ayaa sheegtay " ineey boorsooyinkiisa ka dhex dareemeen haraa waxyaabaha qarxa" inkastoo aan taa lagu soo oogin wadaadka.
Sidaas waxaa yiri Ciise Dhollowaa oo jawaab ka bixinayey hadalkii Prof. Samatar ee ahaa GUJI.. 9/9�
MINNEAPOLIS : Suuqa Al-Karama waa suuq Soomaaliyeed oo kuyaal.. GUJI.. 9/9�
USA: Dawladda Federaalka ma rabto governorka Minnesota inuu aado Cuba asagana kama yeelayo iyo. GUJI... 8/9
Qareenka wadaadkan Mr Phlip Lewis ayaa aaminsan " in boorsooyinka muwakilkiisa laga soo raacay kuwa kale " !
Mid ka mid ah baarayaashii boorsada ayaa maxkamadii horteeda ka qiray inuusan waligii arag boorsooyin waxaas oo kale ku jiraan.
Sarkaal kale ayaa sheegay in sheekhan affartan & kow jirka ah markii la xirayey uu watay " dhowr kun oo doollar" xaaskiisii horena uu u sheegay inuusan qorsheeyneeyn inuu soo laabto .
Qareenka wadaadka ayaa sheegay in sheekhu uu ku dhashay wadanka somalia, dhalashada mareykanka-na uu qaatay 1998, haddana shaqo macalinimo ah uu ka helay Imaaraadka carabta, sidaas darteedna uu u safrayey, dhanka kale madaxa xarunta islamiga ah ee Portland ayaa saxaafadda u sheegay inuu sheekha siiyey lacag dhan 2,000$ si uu ugu safro .
Sarkaal sare oo dowladda katirsan ayaa daboolka ka qaaday inuusan " xaqiijin karin in xirnaanshaha wadaadka uu qeyb ka yahay baaritaanka lagu hayo dhacdooyinkii sept 11 " ee hal-ka sano jirsaday maanta.
Guud ahaan waddankan ayeey maanta ka aloosneyd baroordiiq lagu xusayo sanad guuradii koobaad ee ka soo wareegatay dhacdooyinkii Sept 11.